आज घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आज घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौं । आज सोमबार सुनको मुल्य ओरालो लागेको छ। आज सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ६२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यसअघि छापावाल सुनको मूल्य ६२ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि ओरालो लागेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। यसअघि तेजावी सुन ६१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, आज चाँदी प्रतितोला ७७५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। यसअघि चाँदी ७८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।